स्टीफन हकिंगको अन्तिम अनुसन्धान: कुनै अर्काे ब्रहमाण्डमा अझै डायनासोरकाे अस्तित्व हुन सक्छ !
अन्तरिक्षमा एउटा यस्ताे ठाउँ पनि हुन सक्छ जहाँ हाम्राे पृथ्वी जस्तै अर्काे ग्रह हाेस् र अझैसम्म पनि डायनासोर जस्ता जीवहरू जीवित हुन, अनि प्राचिन युगका मानिसहरू सिकार गरीरहेका हुन । यस्ताे खगाेलिय पिण्ड पनि हुन सक्छ जाे पृथ्वि भन्दा फरक हाेस् । जाे संग कुनै पनि सुर्यर ग्यालेक्सी हरू हुदैनन तर पुथ्वी जस्तै त्यहाँ भौतिक नियमहरू उपलब्ध छन ।
याे कुनै साइन्स फिक्सन फिल्मकाे कथा भने हाेइन बरू खगाेल शास्त्रका बैज्ञानिक स्टिफन हकिङकाे मृत्यु हुनु भन्दा केही दिन अगाडी यस्ताृ परीकल्पना सार्वजनिक गरेका थिए । जुन उच्च ऊर्जा भौतिक विज्ञान को जर्नल मा प्रकाशित गरिएको छ।
प्रोफेसर स्टीफन हकिङकाे याे अन्तिम शाेधपत्रमार्फत पनि अर्न्तरिक्षमा हाम्राे पृथ्वी जस्तै अन्य ग्रह पनि हुन सक्ने अनुमान लगाइएकाे छ ।
प्राेफेसर हकिङकाे यहि वर्षकाे मार्चमा निधन भएकाे थियाे र याे शाेधपत्र उनले मृत्यु हुनु भन्दा ठिक १० दिन अगाडी पेश गरेका थिए ।
करीब १९८० काे दशकमा हकिङ र अमेरीकी भाैतिकशास्त्री जेम्स हर्टलले ब्रहमाण्डकाे निर्माणकाे बारेमा एउटा नयाँ अनुसन्धान पेश गरेका थिए । उक्त अनुसन्धानले अल्बर्ट आइंस्टानकाे त्याे सिदान्तलार्इ प्रमाणित गर्न सहयाेग गरेकाे थियाे कि जसमा १४ अर्ब वर्ष पहिले ब्रहमाण्डकाे उत्पत्ति भएकाे बताइएकाे थियाे । अाइस्टानकाे उब्त खाेजमा ब्रह्माण्डकाे उत्तपति कसरी भयाे भन्ने बारेमा पनि बताइएकाे थियाे ।
यस्तै हकिङ र हर्टलकाे क्वांटम मैकेनिक्सकाे थ्यौरीमा पनि कसरी शून्यबाट ब्रह्मांडकाे निर्माण भएकाे थियाे भन्ने कुरा पुष्टि गरेका थिए । यिनीहरूकाे याे सिदान्तबाट एउटा प्रश्नकाे उत्तर भेटिएपनि अर्काे प्रश्न खडा गरीएकाे थियाे । अर्न्तरिक्षमा एक मात्र नभर्इ अनेक ब्रमाण्डकाे निर्माण भएकाे थियाे । भौतिकशास्त्रि हरूले जब समिक्षा गरे, उनीहरूले बिग बैङ्कबाट एक मात्र नभर्इ अनेक ब्रहमाण्ड निर्माण हने शिलशिला सुरू भएकाे थियाे ।
हार्टल-हॉकिंगले निकालेकाे सिदान्त अनुसार , अर्न्तरिक्षमा भएका ब्रहमाण्डहरू मध्ये केही हाम्राे जस्तै पनि हुन सक्छन जसमा पृथ्वी जस्तै ग्रह पनि हुन सक्छन । र केवल ग्रह मात्र नभर्इ हाम्राे जस्तै समाज र जीवहरूकाे पनि अस्तित्व हुन सक्दछ ।
केही ब्रह्मांडहरू थाैरै मात्रामा फरक हुन सक्छन, जसमा पृथ्वी जस्तै ग्रह र डायनासोर जस्ता जीवहरूकाे अस्तित्व हाेस् । जब कि कुनै ब्रहमाण्ड यस्ता पनि हुन सक्छन जसमा भएका ग्रहहरू पृथ्वी भन्दा बिलकुल अलग हुनेछन र सुर्य र ताराहरू हुने छैनन। यद्यपि यी विचारहरू वास्तवमा धेरै जटिल लागेपनि नयाँ सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव देखिन्छ।
वैज्ञानिक हरूले निकालेकाे याे सिदान्तले थप एक संकट सिर्जना गरीएकाे भाैतिकशास्त्री हरू बताउछन । यदी हकिङले भनेजस्तै अन्तरिक्षमा अन्नत रूपमा ब्रह्माण्ड छन र त्यहाँ अनन्त प्रकारको भौतिकशास्त्र नियमहरू छन् भने एक दिन हामीले हामी कुन ब्रहमाण्डमा छाै भन्ने कुरा पनि थाहा पाउने छैनाै ।
प्रोफेसर हकिंगले प्रोफेसर थॉमस हर्टोगको मिलेर गरेकाे अनुसन्धान , बेल्जियमको कु लिनेन प्रोफेसर थॉमस हार्टोगसँग सम्बद्ध छ । जसकाे खर्च युरोपेली अनुसन्धान काउन्च उठाएकाे थियाे । प्रोफेसर हर्टोगले बीबीसीलाई भनेका छन, “न त म न त हर्किंग यो सेनेराओको साथ खुशी थियो।” जुन प्रोफेसर हकिंगको अन्तिम पेपर उनले प्रोफेसर हर्टोगोगसँग मिलेर काम गरेकाे २० वर्षको कामको परिणाम हो। तिनीहरूले यो गणितिय नयाँ टेक्नोलोजी प्रविधिको विकास गरेर हल गरेका छन्। यस प्रविधिको स्टिंग थ्योरी भनिन्छ अर्को फिजियोलोजी शाखाको अध्ययनको लागि विकसित गरिएको छ।
यी प्रविधिहरूले चिकित्सकहरूलाई नयाँ दृष्टिकोणको साथ भौतिकी सिद्धान्तहरू हेर्न मौका दिएकाे छ। हार्टले-हकिंगको नयाँ पेपर कागजातको नयाँ अनुमानहरू यस अराजकता बहुसञ्चारमा केही स्थिरता ल्याउन प्रयास गर्छन्। हकिंग-हेर्टोगकाे नयाँ परिकल्पनाले याे संकेत गर्दछ कि अर्न्तरिक्षमा हाम्राे जस्ता कैयाै ब्रहमाण्डहरू छन र हाम्राे ब्रहमाण्ड एक नमुना मात्रै हाे ।
प्रोफेसर हर्टोगोग भन्छन्, “यी विचारहरू अच्चमका छन। जब भौतिकशास्त्रीहरूले ब्रह्मांडको सिर्जनाको बारेमा पूर्ण सिद्धान्त विकास गर्छन्, तब उनीहरूलाई वास्तविक कुराहरू साबित गर्न सक्षम हुनेछन ।
उनी भन्छन, “हामीले हाम्रो ल्याबमा जाँच गर्ने भौतिकहरूको नियमहरू सधैंको लागि होइनन्, बिग बांग पछि, जब ब्रह्माण्ड समाप्त भयो र ठुलो भयो, भौतिकको नियम ठूलो मात्रामा विकसित भयो, समयको समयमा भएकाे भाैतिक स्थिरता अवस्थाहरूमा याे निर्भर रहन्छ, हामी जान्न चाहन्छौं कि हाम्रो भौतिक सिद्धान्तहरू कहाँ देखिन्छन्, यो कसरी सुरु हुन्छ र आफैमा यो अनाैठाे छ? “
प्रोफेसर हर्टोगोग भन्छन, यो सिद्धान्तले फिजिकिस्टहरूलाई अर्को ब्रान्ड पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। तिनीहरू भन्छन् कि यी ब्रान्डहरू बिग बङ्ग समयको माइक्रोवेव विकिरणको अध्ययन गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ।
यद्यपि, हार्टोगगले सोच्न सक्दैनन् कि एक ब्रह्मांडबाट अर्कोलाई जान सम्भव छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख २०, २०७५१६:४९
फास्ट ट्रयाककाे डिपिआर निर्माणका लागी १७ कम्पनी दिए आवेदन
आगलागीबाट रु १५ लाख बराबरको क्षति
पूर्वप्रधान्यायाधीश गिरीको निधन
गृहको यस्तो निर्णयले भीभीआइपी र भीआइपीहरू तनावमा: यस्तो छ खास कारण !
मौरी घारमै मर्न थालेपछि कृषक चिन्तित!